သင့်အတွက် အောင်မြင်တဲ့ဘဝဆိုတာဘာလဲ..? | Mycanvas
သင့်ရဲ့ ဘဝကိုပျော်မွေ့စွာနေထိုင်ရန်ကြိုးစားတဲ့အခါမှာ ရှုထောင့် ၃ခုကနေအစီစဉ်ဆွဲပြီး ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ အဲ့ဒီ့ ရှုထောင့်တွေကတော့ 1. Life Design (ဘဝ), 2. Career Design (အလုပ်အကိုင်) နဲ့ 3. Financial Design (ဝင်ငွေ) တို့ဖြစ်ပြီး ၎င်းရှုထောင့်များအပေါ်အခြေခံကာ အစီအစဉ်ရေးဆွဲနိုင်ပါတယ်။ ၎င်းတို့သည် တစ်ခုနှင့်တစ်ခုဆက်စပ်မှုများစွာရှိပြီး အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုများလည်းရှိကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် သင်ဟာ သင့်ရဲ့အနာဂတ်အတွက် ထိုအချက်အားလုံးကိုအညီအမျှချင့်ချိန်စဉ်းစားသင့်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့ My Canvas မှ ထိုအချက် ၃ ချက်ကို တစ်ဆင့်ချင်းဖော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ်အဲ့ဒီ့ ၃ချက်ကိုမပြောခင်မှာ သင့်ဘဝအတွက်အရေးပါတဲ့ Basic Qualities တွေဖြစ်တဲ့ အခြေခံအချက် ၃ချက်ကိုအရင်ပြောပြပေးသွားမှာပါ…
[သင်၏အောင်မြင်သောဘဝအတွက်အကြံဥာဏ် ၃ ချက်]
လူတိုင်းဟာ မိမိတို့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်ဘဝကို တန်ဖိုးရှိရှိနဲ့ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေထိုင်ချင်ကြမှာ အသေအချာပါပဲ… အခုပြောပြပေးမယ့်အချက် ၃ ချက်ဟာ သင့်ဘဝကို တန်ဖိုးရှိရှိနေထိုင်ဖြတ်သန်းနိုင်ဖို့အတွက် အရေးကြီးတဲ့အချက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်…
သင့်ရဲ့ နေ့စဉ်ဘဝမှာ စဉ်ဆက်မပြတ်ကြိုးစားအားထုတ်ဖို့ဟာ မိမိအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်အရမ်းအရေးကြီးလွန်းပါတယ်။ သင့်ကြိုးစားမှုအရာထင်လာခြင်းအတွက် Limit တစ်ခု အနေနဲ့ ပန်းတိုင်တစ်ခုသို့ ရောက်ရှိနိုင်ပေမယ့် Career တစ်ခုအတွက်ပြီးပြည့်စုံတဲ့ အဆုံးသတ်ရယ်လို့မရှိတဲ့အတွက် ကောင်းမွန်တဲ့ကိုယ်ပိုင်ရည်မှန်းချက်တစ်ခု, Limit တစ်ခုကို ထားရှိထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။
(၂) တခြားသူရဲ့ Personality ကို လေးစားခြင်း
သင်တစ်ယောက်တည်းအားကိုးနဲ့တော့ သင့်ရဲ့ဘဝအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းကို ဖန်တီးဖို့ဆိုတာ မလွယ်ကူလှပါဘူး..အခြားပတ်သက်သူများဖြစ်တဲ့ သင့်ရဲ့ မိသားစု၊ မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းတွေ၊ ဆရာတွေနဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေရဲ့ အကြံပေးချက်နဲ့ အကူအညီကို ယူပြီးသင့်ရဲ့ ဘဝ တိုးတက်ရေးကို တည်ဆောက်သင့်ပါတယ်။ လူတစ်ဦးနဲ့ တစ်ဦး အကျင့်စရိုက်မတူကြတဲ့အတွက်ကြောင့် ကောင်းမွန်တဲ့ဆက်သွယ်မှုရှိရန် အခြားသူများရဲ့ Personality ကိုလေးစားရန်လည်း အရေးကြီးပါတယ်။ တစ်ဦး နှင့်တစ် ဦး သဘောထားကွဲလွဲမှုများကိုညှိယူလက်ခံရန်လိုအပ်ပြီး အခြားသူများတွေရဲ့ ရှုထောင့်ဘက်မှကြည့်ခြင်းအားဖြင့် အခြားသူများရဲ့ စရိုက်ကိုနားလည်မှုလွဲခြင်းမပြုရန်သတိပြုဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်။
အခြားသူများကို စိတ်ကျေနပ်မှုရှိအောင်ဆွဲဆောင်နိုင်ရန် နွေးထွေးပျူငှာသော လူမှုဆက်ဆံရေးကို မွေးမြူသင့်ပါတယ်။ သို့မှသာ သင်ဟာ အခြားသူများရဲ့ Attention ကိုရရှိမှာဖြစ်ပြီး သင့်ရဲ့နွေးထွေးတဲ့ ပင်ကိုယ်စရိုက်ကြောင့်သင့်ကိုချစ်ခင်နှစ်သက်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။